Momba anay - Hunan Jiayi Import and Export Co., LTD
Rindrin'ny zavamaniry artifisialy
Hunan Jiayi Import and Export Co., LTD (Turf Intl) dia natsangana tamin'ny taona 2012, sampana ara-barotra amin'ny fanatanjahantena UNIFORM.
Hunan Jiayi Import and Export Co., LTD (Turf Intl) dia manome fikarohana sy fampandrosoana mandroso, famokarana mandroso ary serivisy enjeniera tena tsara. Hatreto, Turf Intl dia miasa any amin'ny firenena maherin'ny 30 manerana an'izao tontolo izao, ary efa namoaka tetikasa fanatanjahantena mihoatra ny 1000, miaraka amin'ny velarantany mihoatra ny 10 tapitrisa metatra toradroa.
Turf Intl mifantoka amin'ny varotra, injeniera ary serivisy turf artifisialy, hazakazaka plastika ary gorodona fanaovana fanatanjahan-tena et peripheral, miaraka amin'ny fanoherana tsara UV sy ny faharetan'ny lelafo, ny lakan-drano lehibe, ny androm-piainana lava, ny fikojakojana ary ny toetra hafa. Mifanaraka amin'ny fanamarinana ny FIFA, IAAF ary fikambanana matihanina hafa izy ireo.
Turf Intl dia mijery ny tontolo iainana sy ny fahasalamana ho toy ny filozofianay, mampiasa akora azo avy amin'ny tontolo iainana, ny vokatra dia manana fahaiza-manao tsara amin'ny fanoherana UV, tsy misy afo mirehitra, fitrandrahana rano, 6-15 taona mampiasa fiainana. Ny fitaovana rehetra dia sariaka amin'ny tontolo iainana, mora karakaraina ary azo averina 100%. Ankoatr'izay, ny orinasa dia manana fitaovana fanaraha-maso vokatra efa vita, fitaovana fanaraha-maso akora ary rafitra fitantanana izay manome antoka fa ny kalitaon'ny vokatra Turf Intl dia manana kalitao tonga lafatra. Amin'izao fotoana izao, ny Turf Intl dia nametraka fifandraisana ara-barotra amin'ireo mpampiasa farany avy amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 40, ny kalitao sy ny serivisinay dia voamarin'ny mpanjifa rehetra.
Hunan Jiayi Import & Export Co., Ltd (Turf Intl) amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa maherin'ny 100 ary mihoatra ny 25% no manana mari-pahaizana Masters na Doctor.
Fa maninona no mifidy anay?
1. Fitaovana fanamboarana Hi-Tech
Hunan Jiayi Import and Export Co., LTD (Turf Intl) dia nivondrona ho mpamokatra ahitra artifisialy matihanina miaraka amina endrika, fikarohana ary fampandrosoana, famokarana ary varotra. Ankehitriny izahay dia manana fitaovana famokarana fibre ahitra mandroso indrindra sy milina turf, eo anilan'izany dia manafatra milina turf avy amin'ny orinasa COBBLE any UK sy ny orinasa TUFTCO USA izay manana ny haitao sy ny fahaiza-manao manerantany. Azontsika atao ny mamolavola ireo vokatra samihafa hisafidianan'ny mpanjifantsika.
2. Hery R&D matanjaka
Manana injeniera 10 ao amin'ny Ivotoeran'ny R&D izahay, dokotera na profesora avy ao amin'ny University of Science and Technology of China avokoa izy rehetra.
3. Fanaraha-maso ny kalitao henjana
3.2 Fitsapana vokatra vita.
4. OEM & ODM ekena
Misy habe sy endriny namboarina. Tongasoa eto hizara ny hevitrao aminay, andao hiara-hiasa mba hamorona kokoa ny fiainana.
Jereo Izahay amin'ny asany!
Hunan Jiayi Import and Export Co., LTD (Turf Intl) dia natsangana tamin'ny taona 2012, dia sampana varotra ivelany amin'ny fanatanjahantena UNIFORM, izay mpanamboatra vokatra fanatanjahantena an-toerana miavaka. Turf Intl dia manome fikarohana sy fampandrosoana mandroso, famokarana mandroso ary serivisy enjeniera tena tsara. Hatreto, Turf Intl dia miasa amin'ny firenena maherin'ny 30 eran'izao tontolo izao, ary efa namoaka tetikasa fanatanjahantena maherin'ny 1000, miaraka amin'ny velarantany mihoatra ny 10 tapitrisa metatra toradroa.
Turf Intl mifantoka amin'ny varotra, injeniera ary serivisy turf artifisialy, hazakazaka plastika ary peripheral, miaraka amin'ny fanoherana tsara UV sy ny faharetan'ny lelafo, ny lakan-drano goavam-be, ny androm-piainana lava, ny fikojakojana ary ny toetra hafa. Mifanaraka amin'ny fanamarinana ny FIFA, IAAF ary fikambanana matihanina hafa izy ireo, ary eken'ny mpanjifa tsara.
Turf Intl dia manaraka ny filôzôfia miorina amin'ny mpanjifa hanomezana vokatra tsara sy serivisy kilasy voalohany ho an'ny mpanjifa.
Teknolojia- Famokarana turf
Ampiasao ny orinasa britanika COBBLE sy ny orinasa TUFTCO amerikana milina famokarana turf artifisialy, raha ampitahaina amin'ny fitaovam-pamokarana eto an-toerana dia nitombo 150% izany.
• Precision, fanaraha-maso isaky ny refy
Ny teknikan'ny Begala mandroso indrindra eto an-tany sy ny haavon'ny famokarana milina Britanika dia mahatonga ny fahombiazan'ny fanaraha-maso tonga lafatra ny milina COFITRA COBBLE, afaka mifehy tsara ny fizotry ny famokarana ary miantoka ny kalitao tsara isaky ny santimetatra.
• Function, mahafeno ny fepetra takinao
Ankoatry ny kalitao tonga lafatra dia manome asa maro izy io, indrindra ny fanatrarana ny haitao faratampon'ny fametahana loko. Izy io dia afaka mamokatra ahitra hatramin'ny valo loko amin'ny fomba loko azo eritreretina rehetra izay nahafa-po ny mpanjifa amin'ny famaritana samihafa ny fomba fitakian'ny vokatra.
• Fahombiazana, mitahiry ny antsasaky ny fotoana famokarana Hatsarao ny kalitaon'ny vokatra, atsangano ny fahombiazan'ny famokarana, raha ampitahaina amin'ny fitaovana famokarana an-trano, ny fiakaran'ny vokatra dia 200%.
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatra na pricelist anay, azafady, avelao ny mailakao aminay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay!
Telefaona:0086 -189 7518 7667
Adress:2006 # Greenland Plaza, Changsha City, Sina.
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina, Sitemap, Flooring Gym vita amin'ny fingotra matevina, Sehatra ara-panatanjahantena Turf artifisialy, Baseball Field Grass, Turf artifisialy volondavenona, Synthetic Turf Pros, Turf artifisialy fanatanjahan-tena, Vokatra rehetra